Bvisa dhairekitori kana uchitsvaga paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Ndatotaura maitiro ekuwana mafaera pane yako Linux distro nenzira iri nyore uye inokurumidza pane dzimwe nguva. Asi tsvagiridzo Iwo musoro wakakosha, chimwe chinhu chinowanzoitwa zuva nezuva uye icho dzimwe nguva chinoda kunyatsojeka kuti uwane nekukurumidza izvo zvaunoda.
Pane dzimwe nguva, kana uchimhanya acraira kuti utsvageIzvo zvinoitika ndezvekuti ichaedza kutsvaga izvo zvauri kuyedza kuita apo chirongwa ichi chakaitwa chinotsvaira ese madhairekitori uye mafaera munzvimbo yauri kutsvaga. Dambudziko rinouya kana zvasvika kune yakakura chikamu kana dhairekitori, iyo inononoka mhedzisiro zvishoma ...
Kuti udzivise izvo, iwe unogona kuita zvishoma zvinhu, senge kusanganisa imwe dhairekitori yekutsvaga kuitira kuti isakanganise nenguva. Uye kune izvo, isu tiri kuzoshandisawo yekutsvaga rairo, senge mune imwe dzidziso yandakasiya nguva refu yapfuura muLxA uye iyo yandakaratidza mune iyi link mundima yekutanga.
Zvakanaka, kusabvisa dhairekitori kubva mukutsvaga uye kuchengetedza nguva, izvo iwe zvaungaite kushandisa iyo -Prune sarudzo nekuwana. Semuenzaniso, fungidzira iwe uchida kutsvaga iyo faira inonzi lxa nechero chekuwedzera mune dhairekitori razvino, asi iwe unoda kutsvaga kwese kwese kunze kwedhairekitori rakatumidzwa bvunzo, sezvo iwe uchiziva kuti hazvizove zviripo. Saka, iwe unofanirwa kumhanya zvinotevera:
Ndokunge, mune ino kesi iwe urikukumbira tsvaga kuti uwane mune yazvino dhairekitori (.), Iwo mafaera anonzi lxa nechero chekuwedzera asi, mune ino kesi, dhairekitori racho rakabviswa ./proof.
Sezvauri kuona, tsvaga murairo une simba wekuwana, asi inopa kumwe kunetseka kupihwa nhamba hombe yesarudzo nemiparamende iyo yainogona kugamuchira kusefa tsvagiridzo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Bvisa dhairekitori kana uchitsvaga paLinux
Red Hat yakaunza sarudzo dzemahara dzeRed Hat Enterprise Linux